Ingxenye: Iqukethe ibha eyinhloko, i-plunger, umgqomo wangaphandle, ikepisi evikelayo ne-catheter Tip.
Ukusetshenziswa okuhlosiwe: Ngezikhungo zezokwelapha, izifo zabesifazane ukugeza amanxeba noma izimbotshana zomuntu
Uhlobo: uhlobo A (Donsa indandatho yohlobo lwendandatho), thayipha B (uhlobo lwe-Push), thayipha C (uhlobo lwe-Ball Capsule).
Ukunemba okuphezulu, idolobha le-Speci and nokuzwela
Asikho isidingo sensimbi, thola imiphumela ngemizuzu engu-15
Isitoreji sokushisa kwamakamelo
Isampula: I-Human Anterior Nares Swab
Thola ubukhona bamaprotheni egciwane
Thola ukutheleleka okunamandla noma okuqala
ISinopharm (Beijing): BBIBP-CorV
ISinopharm BBIBP-CorV COVID-19 ngumuthi wokugoma ongasebenzi owenziwe ngezinhlayiya zegciwane ezikhuliswe ngamasiko ezingenawo amandla we-pathogenic. Lo mqokelwa ukugoma wasungulwa yiSinopharm Holdings neBeijing Institute of Biological Products.
I-NIOSH Uthuli Buso N95 Mask
I-NIOSH igunyaze i-N95 eqinisekiswe ukusebenza okungenani okungama-95% kwezinhlayiya ezithile ezingezona uwoyela. [Ukuvunyelwa kwe-NIOSH #: TC-84A-7861]
Iklip isiqeshana esishintshekayo sisiza ukuthola uphawu oluvikelekile.
Izinto ezihlala isikhathi eside, ezingenayo i-latex ziqinisekisa ukulingana okunethezeka
Iyahambisana nezinhlobonhlobo zezembatho zokuvikela nokuvikelwa kokuzwa.
Imidiya ethuthukile ye-electrostatic eyenzelwe ukuphefumula okulula
foldable i-NIOSH uthuli imaski N95 imaski
I-NIOSH igunyaze i-N95 eqinisekiswe ukusebenza okungenani okungama-95% kwezinhlayiya ezithile ezingezona uwoyela. [Ukuvunyelwa kwe-NIOSH #: TC-84A-7861] Isiqeshana sekhala ekhaleni esishintshayo sisiza ukuthola uphawu oluvikelekile. Izinto ezihlala isikhathi eside, ezingenayo i-latex ziqinisekisa ukulingana okunethezeka Kuhambisana nezinhlobonhlobo zezimboni zokuzivikela nokuvikelwa kokuzwa. Imidiya ethuthukile ye-electrostatic eyenzelwe ukuphefumula okulula
Ukuphefumula, ukotini opholile emuva ogezekayo Ngokujwayelekile kusetshenziswa emitholampilo, kumalabhorethri, kumasifundisane, ezindaweni zokwakha, ekupendeni, ekuhloleni ezentengiselwano nasemakhaya, ukwahlukanisa okungafani nabanye, njll. . Ama-seams afakiwe, ama-hood afakiwe kanye nama-windshields kusiza ukuhlinzeka ngezinga eliphakeme lokuvikela.
Idizayini ephefumulwayo: Izingubo zokuvikela eziqinisekisiwe ze-Class 2 PP ne-PE 40g zinzima ngokwanele ukuphatha imisebenzi enzima ngenkathi zisanikeza ukuphefumula okunethezekile nokuguquguquka.
Umklamo ongokoqobo: Ingubo ifaka idizayini eboshwe ngokuphelele ngentambo ephindwe kabili nezindwangu ezinithiweyo ezivumela amagilavu ​​ukuthi agqokwe kalula ukuze avikeleke.
Idizayini eyinkimbinkimbi: Ingubo yenziwe ngezinto ezingasindi, ezingalukiwe eziqinisekisa ukumelana noketshezi.
I-Size-Fit Design: Lesi sambatho senzelwe ukulingana abesilisa nabesifazane babo bonke osayizi, ngenkathi sihlinzeka ngenduduzo nokuguquguquka.
I-Double Tie Design: Ingubo ifaka idizayini ephindwe kabili okhalweni nasemuva kwentamo ukwakha ukulingana okunethezeka nokuvikelekile.
Kwenziwe ngokuthunga nokuhlanganisa indwangu engeyona eyelukiweyo （I-SMS kanye nendwangu engesiyo eyelukiwe: Yenziwe ngomzimba wekhola, umkhono: ibhande lokunamathela kanye nentambo okhalweni. I-collastband yokuqinisa ； elasttouiffs kanye: nentambo okhalweni okhalweni: Okuhloselwe: ukusetshenziswa okukodwa Okungeyona oyinyumba .
Uchwepheshe Wokuphefumula Ubuso Buso Ffp3
Iziphefumuli ezingaphelele zenzelwe ukuba zikhululeke ukugqoka, zikwazi ukuzivikela, futhi zingakwazi ukumelana nokuphefumula kalula, okwenza zisebenziseke kakhulu futhi zibize kahle. Lesi siphefumuli se-FFP3 NR siyisigaxa esingu-4-ungqimba esihluziwe sesigubhu esine-valve, esinebhande lasekhanda eliguquguqukayo, igwebu elingaphakathi elithambile lamakhala kanye nesiqeshana sempumulo sensimbi. Igwebu elithambile le-intranasal linikeza: 1. Uphawu lobuso oluthuthukisiwe 2. Induduzo yokugqoka komuntu ogqamile 3. Ukuhlukaniswa okungcono I-headband eguqukayo eguquguqukayo inikeza: 1. Ukulingana okuphephe kakhudlwana nokukhululeka ubuso, ikhanda nentamo.
Okungu-3-layer okuphefumula: izingqimba ezi-3 zingavimba kangcono izinhlayiya ezincane emoyeni bese ziyayihluza ukunciphisa ukugcwala kokugqoka imaski.
Idizayini enengqondo Izindlebe zezindlebe ezinwebeka: Izihibe zezindlebe ezinwebeka kakhulu zifaka ingcindezi encane ezindlebeni nasebusweni, ukugwema ukungaphatheki kahle okuhambisana nokusetshenziswa kwesikhathi eside.
OKUDINGEKAYO KOMUNTU NASEKHAYA: Gcwalisa ikhithi yokunakekela yomuntu siqu ukuze isetshenziswe nsuku zonke, ekhaya nasehhovisi, esikoleni nangaphandle, abasebenzi bezinsizakalo nezidingo zomuntu siqu. Isipho esihle somndeni nabangane.
1. Filtration Ukusebenza kahle
Filtration Ukusebenza kwe-non-oily Particulate & Dust295%
2 Ukumelana nokuhogela
Ukuphikiswa okuphelele kwe-inhalation ofs350Pa
3 Ukumelana nokuphefumula
Inani eliphelele lokumelana nokuphefumula250 Pa
4, Shona amahanisi Ibhande Welding Amandla
210N ngemizuzwana eyi-10
Okujwayelekile: 42 CFR 84
Impilo eshalofini: iminyaka emi-5
Umbala: Izinto Ezingabonakali: Isikhundla seMakethe ye-PVC: Izicelo Zezokwelapha: Ukuhlolwa kwezokwelapha nokwelashwa, ubuhlengikazi, izivivinyo zomlomo nezinye izinhlelo zokusebenza ezihlobene; Inikeza ukuvikeleka kwenhlanzeko okusebenzayo kweziguli nabasebenzisi, futhi kusiza ekuvimbeleni ukutheleleka okuphambene. Izikhwama ezingama-50 / ibhokisi, amagilavu ​​ama-2 / isikhwama; yenziwe nge-PVC, i-powder-free.